Ilmo adeerkayga (labb, 22 sanno jir ah) ayaa iga taabtay aniga oo ah gabar (dheddig, 13 sanno jir ah) lugahayga hoostooda xubintayda taranka. Laakiin anigu ma doonayo in uu i taabto. Maxaa dhacaya haddii aan qof u sheego? – Tips for refugees
Ilmo adeerkayga (labb, 22 sanno jir ah) ayaa iga taabtay aniga oo ah gabar (dheddig, 13 sanno jir ah) lugahayga hoostooda xubintayda taranka. Laakiin anigu ma doonayo in uu i taabto. Maxaa dhacaya haddii aan qof u sheego?
Ilmo adeerkaaga looma oggola in uu sidaasi sameeyo.
Qofna looma oggola in uu kaa taabto goobahaaga khaaska ah xubinkaaga taranka ah.
Haddii aad tahay gabar ama wiilba.
Adigu aad ayaad u yartahay.
Taasi ma ahan mid laga oggolyahay gudaha dalka Jarmalka.
Marka aad weynaatid, waxaa laguu oggolyahay in aad adiga go’aansatid qofka ku taabanaya.
Waa in aad u sheegtid daryeelahaaga.
Way kugu caawin karaan.
Si aysan markale arintaasi u dhicin.
Sidoo kale waxaad caawimaad ka heli kartaa xarunta tallo bixinta.
Adigu ma tihid qof dambi leh.
Laguma ciqaabi doono.
Ilmo adeerkaaga waa la ciqaabi karaa haddii aad sidaasi doonaysid.
Kadibna waxaa khasab kugu ah in aad ku cabatid booliiska.
Xarunta tallo bixinta ayaa midaasi kugu caawin karta.
Posted on July 26, 2016 Author editorialteamCategories Abuse/Harassment - Missbrauch/Gewalt
Previous Previous post: Waxaan ahay wiil jira-14-sanno. Daryeelahayga wuxuu doonayaa in uu i dhunkado. Waxaan u malaynaa midaasi in ay tahay mid laga yaq-yaqsado ama la karaahiyeysto. Maxaa ila gudboon in aan sameeyo?
Next Next post: Waxaan ahay wiil 15-sanno-jir ah. Waxaan u malaynayaa in aan jeclahay wiil kale. Ma tahay midaasi mid mamnuuc ah ama reeban? Maxaan samayn karaa?